Marie Michelle Sahondrarimalala "Mararin’ny coronavirus 30 no efa nisotro io tambavy io"
Nisy ny fananganana ny filankevitra siantifika nivondronana mpitsabo maro samihafa tamin’ny fikarohana nahitana ilay tambavy covid organics,
araka ny fanazavan-dRtoa Marie Michelle Sahondrarimalala Talen’ny « Etudes Juridiques » izay misahana ny resaka mifandraika lalàna amin’ny lalàna eo anivon’ny Fiadidian’ny Repoblika. Efa nahazo fankatoavana avy amin’ny « comité d’éthique » avy amin’ny Minisiteran’ny fahasalamana ihany koa ny fampiasana io fanafody io. Efa nahazo « cértificat de consommabilité » avy amin’ny minisiteran’ny fahasalamana, nahazo alalana avy amin’ny Minisiteran’ny Indostria sy ny varotra ny famarotana azy eny amin’ny tsena,... Nanomboka ny 10 aprily dia mararin’ny coronavirus miisa 30 no nisotro azy io, hoy ny fanazavana. Mahakasika ny hoe mbola tsy fankatoavan’ny OMS, dia manana ny fiandrianany ny firenena Malagasy, raha ny fanazavan’io tompon’andraikitra io. Mifameno amin’ny fitsaboana amin’ny endriny mahazatra sy iraisana ny fitsaboana nentim-paharazana, ary isika eto Madagasikara dia manana rafitra mahakasika izany eo anivon’ny Minisiteran’ny fahasalamana.